ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ပီတိမင်းသားနှင့် ပျံလွှားငယ်
မနေ့ကရေးသားခဲ့သော မေတ္တာနှင့်သစ္စာ ပို့စ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဖော် ဇာတ်လမ်းလေးကို မူရင်း အဓိပ္ပါယ် မပျက်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပြီး လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်ကြား မေတ္တာနှင့်သစ္စာတရားများ ထားရှိနိုင်ပုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်. . .
“ မေတ္တာနှင့်သစ္စာကို ရင်မှာပိုက်ပါလို့. . . ရွေရောင်ဝင်းနေသည့် ကြေးရုပ် ”
မြို့တော်ကို စီးကြည့်နိုင်တဲ့ ကုန်းမြင့်ထက်မျာ ပီတိမင်းသားရဲ့ ကြေးရုပ်ဟာ ကျောက်ခုံမြင့်တစ်ခုပေါ်မှာ မားမားမတ်မတရပ်တည်နေပါတယ်။ ကြေးရုပ်တစ်ခုလုံးကို ရွေရွက်ပါးပါးလွှာကလေးတွေနဲ့ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး စီခြယ်ထားလို့ မင်းသားရဲ့ကြေးရုပ်ဟာ နေရောင်မျာ ၀င်းလက်နေပါတော့တယ်။
မင်းသားရဲ့မျက်လုံးနှစ်လုံးက အဖိုးတန်နီလာနှစ်လုံးပါ။ သူ့ရဲ့ခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဓားရှည်ရဲ့လက်ကိုင်ထိပ်မှာ လည်း ကြီးမားတဲ့ ပတ္တမြားတစ်လုံး တပ်ထားပါတယ်။
ချမ်းအေးတဲ့ညတစ်ညမှာ ပျံလွှားငှက်ငယ်တစ်ကောင်ဟာ မြို့ပေါ်ကိုဖြတ်သန်းပြီး ပျံသန်းလာပါတယ်။ သူ့အဖော် များကတော့ ရာသီပူနွေးတဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံဆီ ပျံသန်းသွားနှင့်ကြပြီ။ သူတစ်ဦးသာလျှင် မြစ်ကမ်းပါးက ခါးသွယ်တဲ့ မြက်ပင်မယ်ကို ချစ်ခင်တွယ်တာမိလို့ နောက်ချန်ကျန်ရစ်ခဲ့တာပါ။
“သည်နေ့ည ငါဘယ်မှာ နားခိုရပါ့မလဲ သည်မြို့ကြီးမှာ ငါတည်းခိုစရာနေရာ အများကြီးရှိပါ လိမ့်မယ်။ ဟော . . တွေ့ပြီ ဟိုး . . ကုန်းမြင့်ထက်က ကြေးရုပ်ဆီမှာ လေကောင်းလေသန့်လဲရတယ်။ ဘေးအန္တရယ်လည်း ကင်းဝေးတယ်.. . . အဲသည်မှာငါ ခိုနားမှာပဲ . . . ”
ပျံလွှားငှက်ငှယ်ဟာ ရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့ ပီတိမင်းသားရဲ့ခြေဖမိုးထက်မှာ ဆင်းသက်ခိုနား လိုက်ပါတယ်. . . “သည်တစ်ညတော့ ငါရွေအိပ်ရာထက်မှာ အိပ်စက်ရမှာ ပါလား။ ငါတော်တော်ကံကောင်းတာပဲ. . . . ”
ပျံလွှားငှက်ငယ်ဟာ ကျေနပ်စွာ နှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးတော့ အိပ်စက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်.. . သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကို အတောင်ပံတစ်ဘက်အောက်မှာ လျှို့ဝှက်ဖို့အပြုမှာ. . . . ရေစက်ကြီးတစ်ပေါက်ဟာ သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့ ဖောက်ခနဲ ကျလာပါတယ်. . .
“ဟင် . . . တယ်ထူးဆန်းပါလား. . ကနေ့ညမှာ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ကြယ်ရောင်လရောင်နဲ့လင်းလို့. . . ဘယ်မိုးတိမ်မှာလဲမရှိဘဲနဲ့ ဘာကြောင့်မိုးတိမ်စက်ကြီး ကျလာရသလဲ. . . ဥရောပမြောက်ပိုင်းရဲ့ ရာသီဥတုဟာ သိပ်ဆိုးဝါးတာပဲ. . . . ”
ထိုကအခိုက်တွင်. ဒုတိယရေစက်ကြီးတစ်ပေါက် ဟာ ငှက်ငယ်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်သို့ ဖောက်ခနဲကျလာပြန်တယ်။
“အင်း…သည်နေရာက ရွှေရောင်ဝင်းနေပေမယ့် မိုးစက်တွေကိုမှ မကာကွယ်ပေးနိုင်ရင် ဘာများ အသုံးကျမှာလဲလို့ ငါတစ်ခြားတစ်နေရာမှာ သွားတည်းခိုတာကောင်းပါလိမ့်မယ်….. ”
ငှက်ငယ်ဟာ. လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ဦးခေါင်းကိုထုတ်ပြီး အတောင်ပံနှစ်ဘက်ကိုဖြန့်ကာ ထပျံတော့မယ်အလုပ်မှာ တတိယ အကြိမ်ရေစက်ကြီးတစ်ပေါက် သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့ ကျလာပြန်တယ်… “အင်း….” လို့ အာမေဍိတ်သံပေးပြီး ငှက်ငယ်ဟာ အပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်.. . . . .
၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်းကို မသိခဲ့သော ပီတိမင်းသား
ပီတ်ိမင်းသားရဲ့မျက်ဝန်းအစုံဟာ မျက်ရည်များနဲ့ပြည့်လျှံနေပြီးတော့ မျက်ရည်ဥတို့က တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး သူ့ရဲ့ ရွှေပါးပြင်ပေါ်မှ လိမ့်ဆင်းနေကြတယ်။ လရောင်ဖွေးဖွေးအောက်မှာ သူ့မျက်နှာက လှလွန်းလို့ ပျံလွှားငှက်ငယ် က သနားလာမိတယ်။
"သင်ဟာ ဘယ်သူလည်း . . ငှက်ငယ်ကမေးလိုက်တယ်.. . ."
"ငါက . . . . ပီတိမင်းသားပါ. . ."
"နို့ . . သင်ဘာကြောင့် ငိုနေရတာလဲ . . . သင့်မျက်ရည်တွေကြောင့် ကျုပ်ကိုယ်တောင် . . . ရွှဲရွှဲစိုကုန်ပြီ. . . " "င့ါ ကိုခွင့်လွှတ်ပါ ငှက်ငယ်လေးရယ်. . . ငါအသက်ရှင်နေတုန်းက ၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်းကို ငါမသိခဲ့ဘူး. . . ငါက စန်စူစီမြို့ရဲ့ နန်းတော်ထဲကို ၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်းဆိုတာကို ၀င်ရောက်ခွင့်မပြုဘူးး. . . နေ့အခါမှာ စိမ်းလန်းတဲ့ဥယာဉ်ထဲမှာ အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ ငါကစားရတယ်။ နေ၀င်ချိန်ရောက်လာတော့ နန်းတော်ရဲ့ ခန်းမဆောင်ကြီးမှာ ကပွဲကို ငါဦးဆောင်ရတယ်. . . ငါ့ဘ၀ဟာ ပျော်စရာအတိဖြစ်နေလို့ ငါသိပ်ပျော်ခဲ့တာပေါ့ ကွယ်. . . ဒါကြောင့် နန်းတွင်းသားများက ငါ့ကို ပီတိမင်းသားလို့ ခေါ်ဆိုကြတယ်လေ. . ."
"ဒါပေမယ့် . . . ခုတော့ငါသေပြီလို့ သည်ကုန်းမြင့်ထက်မှာ င့ါကိုတင်ထားကြတော့ င့ါမြို့တော်ရဲ့ အကျည်းတန် တဲ့ရှုကွက်တွေနဲ့ ကြေကွဲစရာကောင်းတဲံ မြင်ကွင်းတွေကို ငါအထင်းသား . . . မြင်နေရတာပေါ. . ဒါကြောင့်လေ ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားကို ခဲသတ္တုနဲ့လုပ်ထားပေမယ့် . . ငါမဖြေဆည်နိုင်ပါဘူးကွယ်. . ..ဒါကြောင့် ငါငိုနေရတာပေါ့." "အင်း . . ငါက သူရွှေအတိလို့ထင်နေတာ . . . သူ့နှလုံးသားက ခဲတဲ့. . . ပျံလွှားငှက်ငယ်က သူ့ကိုယ်သူ ပြောလိုက်တယ်. . . ယဉ်ကျေးသူပီပီ မင်းသားရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကိစ္စကို မမေးကောင်းဘူးလို့ သူတွေးလိုက် တယ်.. . .. ."
အပိုင်း (၂) ကိုဆက်ဖတ်ပါရန်….
ရေးသားသူ may16 at Friday, March 06, 2009
ဖတ်ပြီး တငံငံဖြစ်သွားပါတယ် မြန်မြန်တင်ပေးရင်ကောင်းပါမယ်..ပုံပြင်လေးတွေ ဖတ်ရတာသဘောကျလို့ပါ
မိုးတိမ် March 6, 2009 at 10:08 PM
မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) March 7, 2009 at 1:11 AM
နောက်အပိုင်း တင်ရင် လက်တို့လိုက်ဦးနော်... မျှော်နေမယ်... တအားသိချင်နေပြီ...
kokomaung.uk March 7, 2009 at 3:43 AM
အခန်းဆက်တွေ စတော့မယ်ထင်တယ်။ စာဖတ်တဲ့သူတွေကတော့ မြ၀တီဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ရသလို ဖြစ်ကုန်ရော့မယ်။